तपाइँको गेमिङ युट्युब च्यानल + MCN जानकारी को प्रचार गर्न को लागि मार्गदर्शक
तपाईंको गेमिङ युट्युब च्यानल प्रचार गर्न मार्गदर्शक
प्लस अधिक बहु च्यानल नेटवर्क (MCN) मा
एक गेम युट्युब च्यानल बनाउन लेखहरूको हाम्रो श्रृंखला अहिलेसम्म धेरै सकारात्मक र आशावादी रहेको छ, तर यो एक तथ्याङ्क जाँचको लागि समय हो - तपाईं शायद यूट्युबमा गेमिंग भिडियोहरू गरेर धनी र प्रसिद्ध हुने गर्नुहुन्न। त्यहाँ त्यहाँ धेरै प्रतिस्पर्धा छ, र तपाइँले सबैभन्दा ठूलो भिडीयो लाई सँधै बनाउनुहुने छ, मौका धेरै उज्यालो छ कि उनि शफलमा हराउन र अन्ततः बेवास्ता गर्दछन्। यो बाहिर जान्छ कि भिडीयो यस प्रक्रियामा सजिलो चरण हो, उनीहरूलाई कडा भाग हो।
प्रभावकारी पदोन्नति सजिलो छ
हामीले तपाईंलाई गेमिङ भिडीयोहरू कसरी सिर्जना गर्ने , एक गाइड गेम भिडियो कैप्चर गर्ने , गाइड गर्ने अडियो कैप्चर गर्ने एक गाइड , उत्कृष्ट भिडियो क्याप्चर यन्त्रहरू स्थान र कसरी प्रतिलिपि अधिकारको बारेमा तपाईको भ्रम को सफा गर्ने बारेमा एक सामान्य मार्गदर्शक प्रदान गर्दछ , तर यसका कुनै पनि विषयहरू यदि तपाइँ थाहा छैन भने तपाईंको सामग्री कसरी प्रबर्धन गर्ने?
प्रमोशन #TTuber हुनुको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, सबै भन्दा आवश्यक भाग # 1 हो, तर यो पनि टाढा भन्दा कठिन छ। जबसम्म तपाईले पहिले नै तपाईंको नामको नाम सिर्जना गर्नुभएन र ती दर्शकहरूलाई तपाइँको च्यानल (जस्तै जिम स्टर्लिंग वा अन्य प्रेसिटिटिजहरू जस्तै, वा जोनट्रोन वा एन्सेप्टर) जस्ता व्यक्तिहरू पनि ल्याउन सक्नुहुनेछ वा किन्नुहोस् र कसैलाई तपाइँलाई अत्यन्त छिटो सूचना दिनुहुन्छ र तपाईं एक सौदा (जस्तै यो दुई सर्वोत्तम मित्रहरूको लागि काम गर्नुभयो), तपाई शायद कुनै पनि दर्शकहरू प्राप्त गर्न केवल आफ्नो बट बन्द गर्न जाँदै हुनुहुन्छ।
उत्कृष्ट भिडियो गुणस्तर, सबैभन्दा राम्रो टिप्पणी अडियो गुण, catchiest परिचय परिचय, र सबैभन्दा ठूलो व्यक्तित्व, दुर्भाग्यवश, अब पर्याप्त छैन। तपाईं फिर्ता बस्न सक्नुहुन्न र सोच्न सक्नुहुन्छ कि गुणस्तरले मात्र दर्शकहरूलाई आकर्षित गर्नेछ। अहिले, 2015 मा, हजारौँ च्यानलहरू सबैसँग समान सामानहरू र त्यही दर्शकहरूलाई आकर्षित गर्न खोजिरहेका छन्। यदि तपाईं सर्वोत्तम बनाउनुहुन्छ भने, धेरै अनन्य, सबै भन्दा धेरै मूल सामग्री जो तपाई कल्पना गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईले अझै पनि दर्शकलाई आकर्षित गर्न यसको हङ्कलाई बढावा गर्न आवश्यक छ।
म यो पर्याप्त बेर सक्दैन। प्रमोशन कठिन छ। वास्तवमा, साँच्चिकै मेहनत। सोशल मिडियामा शून्यमा मात्र तपाइँको सामग्री लिङ्कहरू पठाउन पर्याप्त छैन, तपाईले वास्तवमा मानिसहरूको साथ अन्तरक्रिया गर्न आवश्यक छ र तपाईले तपाइँको र तपाईंको सामग्रीको बारेमा दर्शकलाई निर्माण गर्न आवश्यक छ। तपाईं अनुयायीहरू प्राप्त गर्न आक्रामक हुनुपर्दछ (तर कष्टप्रद हुँदै लाइनमा पार नगर्ने)। तपाईं साँच्चै मा धेरै प्रयास राख्नु पर्छ।
यति धेरै प्रतिस्पर्धाको एक कष्टप्रद खतरा यो हो कि, फेरि पनि, तपाईंको भिडियो अनूठा र अद्भुत र महान छ, धेरै मानिसहरू अझै पनि परवाह गर्दैनन्। फिर्ता दिन, तपाईं केहि राम्रो संग आउन र यसलाई कोटकु वा विनाशकारी या कहीं र यसलाई बुझ्न सक्नुहुनेछ, र तिनीहरूले मन पराए, उनि एक पोस्ट चलाउन सक्छन् वा यसको बारेमा केही हुन सक्छ। अब होइन, कम्तिमा पनि सानो समयका च्यानलहरूको लागि। तिनीहरू सैकड़ों, वा शायद हजारौं, "मेरो YouTube च्यानल हेर्नुहोस्" को हरेक दिन कथा पिचहरू र तिनीहरूलाई अनदेखा गर्नु पर्छ। यी ब्लगहरूसँग नयाँ स्तम्भहरू केवल एक पोस्टसँग जोड्ने क्षमता छ, तर सामान्यतया नचाहने र यसको सट्टा रबाबा वा पेभडी पाइई वा अरू कसैलाई पहिले नै प्रसिद्ध छ भन्ने बारेमा एक कथा चलाउनुहोस्।
एक कुरा उल्लेख गरिनै पर्छ कि उपभोक्ता YouTube ले गणना गर्दछ जुन तिनीहरू उनीहरूले देख्दैनन्। जबसम्म तपाइँ 1000+ ग्राहकहरूसँग केही साँच्चिकै गद्दा च्यानल (खराब अडियो, जोर कष्टप्रद होस्टहरू, आदि) देख्नुहुन्छ, त्यहाँ एक उच्च सम्भावना छ कि उनीहरूले यसलाई वास्तविक रूपमा गर्दैनन्। त्यहाँ धेरै चहचहाना र अन्य सोशल मिडिया खाताहरू छन् जुन सब-से-उप सञ्जालहरू विशुद्ध रूपमा सेट अप गरिएका छन् जहाँ सबैले एक-अर्कालाई एक-अर्कालाई पछ्याउन कृत्रिम रूपमा आफ्नो ग्राहकको गणनामा फ्याँकिएको छ। त्यहाँ सेवाहरू छन् जुन तपाईंलाई पैसा खर्च गर्न र ग्राहकहरू खरिद गर्न अनुमति दिन्छ। यी चीजहरूले तपाईंलाई साँच्चै फाइदा गर्दैन किनभने यी नक्कली अनुयायीहरू र ग्राहकहरूले तपाईंको सामानहरू वास्तवमा हेर्ने छैनन्, त्यसैले तपाईंको भिडीयो अझै पनि कुनै हेराई छैन। यो वैध तरीका गर्न को लागी राम्रो।
GamTubers लाई Gaming को लागी थप सुझावहरू हेर्नुहोस्।
मल्टी-च्यानल-नेटवर्कको बारेमा सत्य
यो सबैले हामीलाई बहु-च्यानल-नेटवर्कमा ल्याउँछ। MCN को YouTube मा केही कारणहरू छन् - प्रतिलिपि अधिकारका समस्याहरूसँग तपाइँलाई YouTube सुविधाहरू खोल्नको लागि तपाईंले अझैसम्म पहुँच नहुन सक्नुहुन्न (जस्तै अनुकूलन ब्यानरहरू, थम्बनेलहरू, मुद्रीकरण, आदि), र तपाईंलाई पनि प्रचार गर्न मद्दत गर्न। पहिलो दुई फाइदाहरू महत्त्वपूर्ण हुँदैनन् किनकि तिनीहरू प्रयोग गर्थे (प्राय: खेल कम्पनीहरू तपाइँले अहिलेका भिडियोहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छन्, र यूट्यूब सुविधाहरू उन्नत हुनेछ यदि तपाईं वहिरो भए पनि उन्नत हुनेछ) तर तेस्रो पदोन्नति - धेरै उपयोगी हुनुहोस्।
त्यसो भए, तथापि, सबै MCN को समान रूपमा सिर्जना गरिएको छैन। तीमध्ये केही - तिनीहरूमध्ये धेरै, वास्तवमा - केवल पैसा कमाउन बाहिर घोटाला छन्। यदि नेटवर्क 100k + सदस्यहरू बारे ब्र्रिगहरू छन् भने, उदाहरणका लागि, तपाईं किन तिनीहरूसँग सामेल हुन चाहानुहुन्छ? तिनीहरू तपाईंलाई सहयोग गर्न वा साँच्चै तपाईंलाई प्रचार गर्न सक्षम हुनुहुन्न (तपाईं भर्खरै फेरबदलमा हराउनुहुन्छ)। तिनीहरू बस तपाईंबाट पैसा कमाउन चाहन्छन्। यसका लागि उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईएको छ। यसका बारेमा जानकारी गराईएको छ। तपाईले तपाईको ब्लगको बारेमा जानकारी गराउनुभएको छ। YouTubers!)। पहिलो सञ्जालमा जोड्नु भएको छ कि तपाईंले YouTube मा सन्देशहरू पठाउनुहुन्छ (तिनीहरूका सन्देशहरू लगभग एकै कारणले "स्पाम" फोल्डरमा एक कारणको लागि समाप्त हुन्छ) जानेको सबैभन्दा राम्रो तरिका होईन।
केहि सञ्जालहरू भर्ती प्रणालीहरू छन् जहाँ भर्तीहरूले कुनै पनि च्यानलहरूको लागि एक प्रतिशत प्राप्त गर्छन् जुन तिनीहरूले सामेल भेट्टाउँछन्, जुन अर्को साईकल साईकल सञ्जाल मात्र धेरै प्रयोगकर्ताहरू आकर्षित गर्न मात्र रुचि राख्छन् र वास्तवमा गुणस्तरको हेरविचार गर्दैनन्। थप च्यानलहरू जोडिन्छ, अधिक पैसा सञ्जाल बनाउँछ। र यो पनि किनकी उनि एक bazillion च्यानलहरु संग सम्झौता, उनि शायद वास्तव मा तपाईं को प्रचार गर्न को लागि समय छैन। त्यसोभए तिनीहरू के असल छन्?
राम्रो नेटवर्कमा सामेल हुन वास्तवमा तपाईलाई धेरै सहयोग गर्न सक्दछ, यद्यपि, तर राम्रो नेटवर्कहरूमा पनि धेरै caveats छन्। तपाईं एक MCN मा दुई समूह मध्ये एक को रूप मा शामिल छ - "व्यवस्थित" वा "सम्बद्ध"। व्यवस्थित च्यानलहरू ठूला केटा हुन् जसले MCN वास्तवमा एक क्रेप बारेमा। तिनीहरूले पदोन्नति प्राप्त गर्नेछन्, र ब्रान्ड सौदाहरू, विशेष उपचार, र ती छिटो भुक्तान गर्न पाउँछ र साथसाथै MCN ले कुनै पनि प्रतिलिपि अधिकार मुद्दाहरूको जिम्मेवारी लिनेछ। सम्बद्ध च्यानलहरू, अर्कोतर्फ, सामान्यतया तिनीहरूको आफ्नै हो जब यो प्रतिलिपि अधिकार आउँदछ र आवश्यक च्यानलहरू जुन च्यानलहरू गर्छन भनेर प्राप्त गर्दैनन्। व्यवस्थित र सहबद्धका बीच सदस्यहरू विभाजित गरेर, MCN ले पहिले भन्दा बढी च्यानलहरूमा लिन सक्दछ, तर सबै जोखिम बिना।
धेरै मानिसहरू सोच्न लगाउँछन् कि एमसीएनमा सामेल हुन YouTube को प्रसिद्धि र भाग्यको लागि आवश्यक कदम हो, तर यो वास्तवमा होइन। सम्बद्ध अभिव्यक्तिहरूले सञ्जाललाई आधारभूत रूपले कसैलाई स्वीकार्न र सबैलाई लागू गर्ने अनुमति दिन्छ, तर यसको कारणले उनीहरूले प्रयोग गर्ने सदस्यहरूलाई लगभग मूल्य फिर्ता गर्दैनन्। यस्तो देखिन्छ जस्तो लाग्छ कि मानिसहरु लाई एक एमएनएन मा शामिल हुनु पर्छ, तर वास्तव मा उनि जो उनको भुगतान को बदलन को लागी उनिहरु को पेशकश मा एक नजर राख्छन् किनकी यो यसको लायक नहीं हुन सक्छ।
त्यसो भए, यदि एक सञ्जालले मलाई व्यवस्थित सम्झौता प्रदान गर्यो भने, मैले सम्भवतः यसलाई लिन सक्थेँ, तर क्लबको अंश हुन सम्बद्ध सम्बद्ध हुनको लागि साइन अप मलाई धेरै अर्थ छैन।
सामान्य पदोन्नति सुझावहरू
सोशल मिडियामा कुराकानीमा संलग्न हुनुहोस्। सबै ठाँउ लिङ्क भर्खरै पोष्ट नगर्नुहोस्, तर वास्तवमा तपाईले कुरा गर्ने व्यक्तिहरूलाई थाहा पाउनु भएकोमा भाग लिनु हुन्छ। यस जैविक अन्तरक्रियाको माध्यमबाट कमाएको प्रशंसकले तपाईलाई अरु केहि गर्न को लागी अधिक सम्भावना पाउनेछ।
ह्याट्सगै अद्भुत छन्। दायाँ छिटोछिनहरू वा ट्वीट अधिकारहरू @ दायाँ खाताहरू प्रयोग गर्नुहोस्, र उनीहरूले तपाइँको भिडियो वा तपाईंको ग्राहकलाई जुनसुकै ग्राहकलाई पुन: ट्वीट गर्नुहुनेछ। फेरि, स्प्याम मान्छे नगर्नुहोस् र कष्टप्रद हुनुहोस्, तर कुञ्जी पुन: ट्वीटरले नयाँ दर्शकहरूको धेरै आकर्षित गर्न सक्छ जसले आशा गर्दछ कि, तपाइँको अन्य सामान पनि हेर्नुहोस्। Tweet @ प्रकाशकहरू वा आधिकारिक गेम खाताहरू र चीजहरू जस्तै कि सर्वोत्तम परिणामहरूको लागि।
अन्य YouTubers सँग सहकार्य गर्नुहोस्। यदि तपाईं दुवै स्थानीय हुनुहुन्छ भने, त्यसो भए एक भिडियो एक साथ बनाउनुहोस्, तर यो जरूरी होइन कि यो बारेमा के हो। सट्टामा, एकसाथ काम गर्नुहोस् एक-अर्काको भिडियोलाई प्रबर्धन गर्न। तपाईंले भिडियोको दौरान चिल्लाउनुहुने टिप्स दिनुहोस्। मानिसहरूलाई सहयोग गर्न सजिलो छ।
तपाइँको भिडियोको अन्त्यमा "सब्सक्राइब" बटन राख्नुहोस्। तपाईं यो कसरी हुन सक्छ प्रभावकारी छान्न हुनेछ।
यो टिप आफैलाई तपाइँले ट्याबर्स भन्दा बढी दर्शकहरूको लागि बढी छ, तर यदि तपाईंले एक च्यानल मनपराउनुहुन्छ वा तपाइँलाई एक विशेष भिडियो मनपर्छ भने, मान्छे बारे यो बताउनुहोस्! मुखको सकारात्मक शब्द इन्टरनेटमा सबैभन्दा शक्तिशाली चीजहरू मध्ये एक हो। सामग्री सृजनाकारहरू प्राय: सामान प्रवर्धन गर्ने प्रयास गर्दै छन् (यो खगोल टर्फफाई भनिन्छ), तर वास्तविक वास्तविक, ईमानदार, मान्छे जस्तै कि चीजले मुख को अनुहारको शब्द अचम्मको परिणाम हुन सक्छ। यदि तपाईं एक भिडियो मनपर्यो भने, यो ट्वीट गर्नुहोस्। यसलाई Facebook मा साझा गर्नुहोस्। यसलाई हेर्नका लागि तपाईंका मित्रहरूलाई भन्नुहोस्। तपाईंको दिनबाट पुनः केहि सेकेण्ड लिने केहि चीज एक ठूलो प्रभाव हुनेछ र तपाईले मनपर्ने च्यानलहरूलाई सहयोग पुर्याउनुहुनेछ।
YouTubers को इच्छुक सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा थाहा हुनु पर्छ कि तपाइँको च्यानल को प्रचार गर्न सबै भन्दा कठिन भाग हो। वास्तवमा तपाईले सुरु गर्नु अघि केहि विचार राख्नु भयो।
निस्सन्देह, मैले लेखको यस श्रृंखलाको सम्पूर्ण सङ्ग्रहको उल्लेख गरिसकेपछि, तपाईंले कहिल्यै YouTube युट्युब भिडीयोहरू बनाउन सुरु गर्नुभएन किनकी तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि तपाई धनी हुनुहुन्छ। तिनीहरूलाई बनाउनुहोस् किनभने Minecraft वा मडडेन वा हेललाई मजा गर्दै र भिडियोहरू मनोरञ्जन गर्दै छन्, र कुनै पनि रकम वा मान्यता बोनस मान्न सकिन्छ।
Forza Horizon2समीक्षा (XONE)
2018 मा खरीद गर्न7उत्तम गेमिङ हेडसेटहरू
10 उत्तम ओजी Xbox ड्राइभिंग खेलहरु
उत्तम Xbox 360 खेल शैली द्वारा
कल को ड्यूटी: ब्ल्याक ओप्स III समीक्षा (XONE)
Xbox Live Gold किन्नुहोस्
ग्रैंड थेफ्ट अटो: उपाध्यक्ष बक्स को लागि Xbox
गति समीक्षाको लागि आवश्यक (XONE)
मृत राइजिंग धोखा र धोखा - Xbox 360
जाभास्क्रिप्ट प्रयोग गरेर धेरै कागजातहरूमा एचटीएमएल समावेश गर्ने
AHS फाइल के हो?
Starfall.com: एक शैक्षिक वेबसाइट
Wii को अपडेट गरे पछि Homebrew च्यानल को पुनर्स्थापित कसरि गर्नुहोस
सैमसंग तपाइँले घुमाइएको स्क्रिन टिभीको लागि एक घुमाइएको ध्वनि पट्टी खरीद गर्न चाहन्छ
म कसरी मेरो विन्डोज पीसी एक टिभिमा जडान गर्न सक्छु?
हैकर आक्रमण! यो कसरी काम गर्दछ ...
Nikon समस्या निवारण: आफ्नो Nikon क्यामेरा निश्चित गर्नुहोस्
कसरी स्क्यानर कार्य
ADMX फाइल के हो?
AIM मेल वा AOL मेलका साथ फाइल अनुलग्नकहरू कसरी पठाउनुहुन्छ?
रास्पबेरी पिईको GPIO को साथ एलईडी लाइट
तपाईले AppleCare + तपाईको आईप्याडको साथ पाउनु पर्छ?
सबै एप्पल आइफोन एक्स को बारे मा
शीर्ष आईफोन4घटनाहरू
वजन घटाने युक्तिहरु आईफोन र आइपड को प्रयोग गरेर
तुल्यकारक र डिजिटल ध्वनि प्रोसेसर
सुपर मारियो रन Nintendo को पहिलो आईफोन मारियो गेम हो
मरने लाइट फल्स अम्बेशन को बस छोटो
एक कम्प्यूटरमा धेरै आइपडहरू प्रयोग गर्दै: प्लेसूचीहरू
कसरी फिक्स गर्ने Mfc90u.dll त्रुटि फेला परेन वा छुटेको छैन